Hetauda Khabar - सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्दैछन् संसद्का कर्मचारी
सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्दैछन् संसद्का कर्मचारी
संसद्का कर्मचारीले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेका छन् । ऐनविपरीत संसद्का सचिव, उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीले गाडीको सुविधा उपभोग गरेका हुन् । कसैले एकभन्दा बढी गाडी लिएर त कसैले आवश्यकताविना गाडी चढेर दुरुपयोग गरेका छन् । गाडीको इन्धनमा समेत अनियमितता भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
अब प्रदेशबाटै पाइने छ स्मार्ट लाइसेन्स
प्रदेश ३ मा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात असमान
सबैभन्दा बढी सरकारी जग्गा मकवानपुरमा
अझै बनेन हेटौंडा-काठमाडौं जोड्ने 'कान्ति लोकपथ', ६० बर्षदेखि म्याद थपेको थप्यै !
एसईईको नतिजा फेरबदल, तपाइको जिपिए बढेको हुनसक्छ पुनः हेर्नुहोस्
हेटौंडामा ऐनविपरीत ५० पोके डेरी ! साउनदेखि नीति लाउने तयारीमा मेयर